Pakistana: Parachinar, ilay paradisa lasa helo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Jolay 2018 7:14 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, Español, বাংলা, English
Parachinar no foiben-toeran'ny Masoivohon'i Kurram ao amin'ireo Faritra ara-poko tantanana amin'ny fomba federaly (FATA) ao Pakistana. Fonenan'ireo amperora maongola rehefa lohataona ity faritra ity taloha, izay mitringitringry ao amin'ilay faritany afghana ao Paktia. Kanefa, saronan'ireo tahotra ateraky ny fikomian'ny talibàna taorian'ireo ady lavabe nataon'ny afghana nandritra ny taonjato 80 sy 90 ny hakanton'ny endritany. Ankehitriny, azon'ireo talibàna mpikomy ilay tanàna izay ampanjakàny ny tahotra, mahavoatery ny mponina hiala noho ny tahotra.
Tsy tranga vao haingana ilay fikomiana. Atolotry ny blaogera Razz ao amin'ny Waking Life [amin'ny teny anglisy, toy ireo rohy rehetra voatanisa] ny topimaso haingana momba ny tantara fahiny:
Mandinika lalindalina kokoa ny tantaran'ny fifandonana ara-pinoana ao amin'ny faritra i Ali Hassnain:
Nampangaina ho tsy manome fandrakofana mendrika ilay trangan-javatra ireo haino aman-jery tao Pakistana. Araka ny Press TV :
Ketraka amin'ilay fahanginan'ny haino aman-jery i Ammar Faheem, ao amin'ny Ammar 360, raha toa heveriny ireo tranga ireo ho toy ny «Famonoana Tambabe ny shiita»:
Tao anatin'ny iray tamin'ireo lahatsoratra ao amin'ny Pro-Pakistan, aroson'ny mpanoratra ny fanangonantsonia iray miangavy an'ireo olona avy amin'ny finoana hafa mba hanatevin-daharahana ireo mpiasa amin'ny maha-olona mba hanintonana ny saina hifantoka amin'ny krizy miseho amin'izao fotoana izao:
Noforonina ny blaogy ho an'ity fanentanana ity, izay mitondra ny lohateny hoe Fanohanana an'i Parachinar mba hanamafisana ireny antso ireny, miaraka amin'ny tolokevitra sy fepetram-panampiana :